Diyaaradaha Kenya oo markale duqeyn ka fuliyay Gobolka Gedo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Diyaaradaha Kenya oo markale duqeyn ka fuliyay Gobolka Gedo
Diyaaradaha Kenya oo markale duqeyn ka fuliyay Gobolka Gedo
Diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ayaa saaka waxaa ay duqeymo culus ka fuliyeen degaano hoostaga degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan.
Dadka ku nool tuulooyin hoostaga degmada Ceelwaaq ayaa waxaa ay sheegeen in saaka waaberigii hore ay ku bilaabatay duqeynta, waxaana degaannada la duqeeyay kunool dad Reer Miyi Xoolo dhaqato ah.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in duqeynta ay ku dhaawacmeen dad rayid ah sidoo kale lagu baabi’iyay Xoolo ay lahaayeen dadka Reer Guuraaga ah.
Todobaadkaan waa markii Saddexaad oo Ciidamada Kenya ay duqeyn ka fuliyaan degaannada hoostaga degmada Ceelwaaq, waxaana weli ka hadlain laamaha Amniga degmada iyo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleSoomaaliya & Turkiga oo ka wada hadlay la-dagaalanka Al-Shabaab
Next articleLionel Messi o goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay Kooxda Paris St-Germain